Dowlada Denmark: Khudbada jimce waa in af Daanish lagu akhriyo ama la turjumo. - NorSom News
Dowlada Denmark: Khudbada jimce waa in af Daanish lagu akhriyo ama la turjumo.
Xukuumada ka taliso dalka Denmark ayaa sheegtay inay diyaarineyso sharci dhawaan la horkeeni doono golaha baarlamaanka dalkaas, kaas oo ku saabsan in khudbada jimcaha iyo khudbooyinka kale ee ka baxa goobaha cibaadada lagu soo jeediyo luuqada Daanish-ka ama lagu sameeyo turjumaad, si loo fahmo nuxurkeeda.
Dowlada Denmark ayaa Ujeedada xeerkan cusub ku sheegtay inuu yahay kahor tagista inay abuuranto bulsho ka indho iyo dhaga xiran bulshooyinka kale ee Denmark kunool. Iyo in sidoo kale dadka ku xiran goobaha cibaadada oo qeyb badan oo kamid ah aysan fahmin Carabiga ay la socdaan waxyaabaha looga hadlayo khudbooyinka.
Fikirka sharcigan cusub waxaa soo jeediyay Xisbiga Socialdemokratiet oo hada haya talada dalka Denmark ayna katirsantahay reysulwasaaraha denmark Mette Frederiksen. Waxaana lagu sheegay inay muhiim tahay in la ogaado ama la fahmo waxyaabaha looga hadlayo khudbooyinka laga jeediyo goobaha cibaadada, si ay u timaado isku furnaansho ka dhex jirta bulshooyinka iyo kala xirnaansho la´aan.
Xigasho/kild: Regeringen vil have prædikener og forkyndelse på dansk.
Previous articleWiil soomaali ah oo booska 1aad ka galay tartan orodka ah.
Next articleGabar u doonan ayuu kufsaday: 4,3 sano xabsi ah ayaa lagu xukumay.